Ndị na -emepụta ogige PVC - China PVC Compound Factory & Suppliers
UPVC Pipe dabara adaba granules
Ogige PVC a makwaara dị ka ngwakọta akọrọ sitere na nchikota nke resin PVC na ihe mgbakwunye na-enye usoro dị mkpa maka ngwa ngwụcha. Mgbakọ a na -edekọ mkpokọta mgbakwụnye dabere na akụkụ otu narị nke resin PVC (PHR). Enwere ike ịhazi ogige PVC maka ihe na -agbanwe agbanwe site na iji plasticizer, nke a na -akpọ PVC Plasticized Compounds yana maka ngwa siri ike na -enweghị plasticizer akpọrọ UPVC compound. N'ihi ezigbo mma ya, akwa siri ike na adabara ...
Ihe PVC maka ịkwakọ ngwaahịa & ihe nkiri na -ebi akwụkwọ
Ihe nkiri PVC mebiri emebi - ụdị ihe mkpuchi mebiri emebi ejiri maka ngwa dị iche iche. Dị ka anụ ọhụrụ, anụ ọkụkọ, akwụkwọ nri, akwụkwọ, akara mmiri ịnweta mmiri yana karama ọgwụ, ihe ọ ,ụ ,ụ, kemịkalụ kwa ụbọchị, ọgwụ, biya na akara wdg wdg PVC na -anọchite anya Polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride bụ plastik nke atọ kacha emepụta n'ụwa. E nwere ihe nkiri PVC klas abụọ: Label Printing Grade Kwesịrị ekwesị maka imepụta ma ọ bụ ibipụta aka na aha mmachi. Ihe nkiri PVC a doro anya, sie ike ...
Ogige PVC maka mkpuchi waya na mkpuchi mkpuchi
Ogige PVC USB bụ ihe thermoplastic sitere na nhazi ihe polyvinyl chloride mejupụtara, nke a na -emepụta dị ka nsogbu. A na -enye ihe dị iche iche na ogige dabere na ngwa yana ọnọdụ ọrụ ihe. A na -eji granules PVC USB na ụlọ ọrụ eriri na onye na -eduzi nrụpụta mkpuchi na waya mkpuchi na jaket sheaths. A na -arụpụta PVC General Sheathing Grade Combund site na iji akụrụngwa akụrụngwa PVC na -amaghị nwoke, na -agbaso RoHS (Heav ...